FFKM : Mpanao politika miafina endrika -
AccueilRaharaham-pirenenaFFKM : Mpanao politika miafina endrika
Tsy hiadian-kevitra intsony fa mpanao politika ny mpitondra Fiangonana eto amintsika, indrindra ny FFKM ary mikatsaka fanjakana tahaka ireo antoko politika rehetra ihany. Niteraka fizarazarana teo amin’ny mpino izany fidiran’ny politika teo anivon’ny FFKM izany, ka nahatonga ny firongatr’ ireo Fiangonana zandriny tato anatin’ny 15 taona.
Ny FFKM no anisan’ny mpandray anjara vaventy tamin’ny fanonganam-panjakana ny taona 1991, namolavola sy nampakatra ny profesora Zafy Albert teo amin’ny fahefana faratampony. Henatra ho an’ny FFKM anefa ny zava-nisy nandritra ny fitondrana UNDD, indrindra ny fiverenan’ny amiraly Didier Ratsiraka ny taona 1996, ka nanao izay fomba rehetra nampakarana ny filoha lefitry ny FJKM teo amin’ny fitondrana ny taona 2002. Nanohana mivantana ny hetsiky ny « sarom-bilany » ny mpitondra Fivavahana, ary nitazam-potsiny teo anatrehan’ny fandrobana ireo mpiara-dia tamin’ny amiraly Didier Ratsiraka sy ny setrasetran’ireo « Zanadambo » nanerana ny Faritany enina. Mbola henatra ho an’ny FFKM indray koa anefa ny fitondrana Marc Ravalomanana, ary nanomboka teo dia tsy nanana ny maha izy azy teo anatrehan’ny vahoaka intsony izany FFKM izany.
Tsy takona nafenina ny ady an-trano teo anivon’ny FFKM taorian’ny fanonganam-panjakana ny taona 2009. Nangiana teo anatrehan’ny fandrobana sy ny vonoan’olona mahatsiravina ny Fiangonana, ary namela ny mpino hifandrafy noho ny tsy fitovian-kevitra ara-politika teo amin’ireo mpitondra Fiangonana. Tsy nanana fahamenarana intsony ny mpitondra Fiangonana, vaky bantsilana teo imason’ny mpino fa tena mpanao politika ny FFKM, ary samy manana tombontsoa manokana notandrovina: tao ny naneho fiandaniana marindrano tamin’i Marc Ravalomanana, ka nampiasa ny Fiangonana ho fitaovana (Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana), tao ny nanohana tsy misy fepetra an’i Andry Rajoelina nanoloana ny tsikera sy ny fanakianana isan-karazany. Nilatsaka ny saron-tavan’ny FFKM, nitanjaka teo anatrehan’ny mpino ny Fiangonana, dia izao mbola mieritreritra ny hamita-bahoaka izao indray. Inona no ambadika politika tamin’iny fanambarana iny?
Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao, araka ireo zava-nitranga tany aloha ireo ny fanambarana farany nataon’ny FFKM teo. Hanolotra kandidà indray ve izany ny FFKM amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2018 mba hahazoany fahefana sy hamafany ny tsy fahombiazany nandritra izany nanaovany politika izany? Tokony mitsotra ny marina fotsiny ny FFKM hoe “manana kandidà amin’ny 2018” fa tsy hilalao ny ara-panahin’ny vahoaka amin’ny fanaovana propagandy tahaka izao. Ankoatra ny “paradisa sosialista”, ny “ento miakatra ity firenena ity”, ny “minoa fotsiny ihany”, “ny fanovàna”, inona indray ny baikom-pitolomana politika, na “slogans démagogiques” omen’ny FFKM amin’ity manaraka ity? “Fiovam-penitra mahery vaika”?